IP တစ်ခုနှင့် port တစ်ခုမှတစ်ခုသို့အခြား IP သို့ port သို့လမ်းကြောင်းပြောင်းခြင်း | Linux မှ
IP တစ်ခုနှင့် port တစ်ခုမှအခြား IP နှင့် port တစ်ခုသို့ traffic ကို redirect
ကျွန်ုပ်တို့တွင် ၀ န်ဆောင်မှုအချို့လည်ပတ်နေသည့်ဆာဗာရှိသော်လည်းမည်သည့်အကြောင်းပြချက်ကြောင့်မဆိုထိုဝန်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်။မသိရပါဘူး) အခြားဆာဗာသို့ ပုံမှန်နှင့်မကြာခဏပြုလုပ်ရမည့်အချက်မှာ DNS မှတ်တမ်းရှိ IP ကိုရိုးရှင်းစွာပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်တစ်စုံတစ် ဦး ကအိုင်ပီပုံစံကွဲကို အသုံးပြု၍ ၎င်းကိုထိခိုက်လိမ့်မည်။
ဘာလုပ်မလဲ? ... ရိုးရိုးလေး, ထိုဆာဗာမှလက်ခံရရှိသည့်လမ်းကြောင်းကိုထို port မှတဆင့်ထပ်တူဆိပ်ကမ်းရှိအခြား server သို့ပြန်ပို့ပါ။
ပထမတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ enable လုပ်ထားရမှာပါ ထပ်ဆင့်ပို့ခြင်း ဆာဗာပေါ်တွင်၊ ဒီအရာအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါတို့ကိုထားမည်။
ဒီသင်ခန်းစာမှာပြထားတဲ့ command အားလုံးကို administrative privileges နဲ့ execute လုပ်ရမယ်။ root user နဲ့တိုက်ရိုက်ကွပ်ဖို့လုပ်ဖို့ငါအကြံပေးလိုတယ်။
ယခင် command သည်သင့်အတွက်အလုပ်မလုပ်လျှင်ဤအခြား command ကိုလည်းသုံးနိုင်သည်။အဲဒါ CentOS မှာဒီလိုဖြစ်ခဲ့တာ):
CentOS နှင့်အခြားသူများကဲ့သို့ RPM distros များတွင် -
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်အရေးကြီးသောအရာသို့ဆက်သွားလိမ့်မည်၊ ဆာဗာမှတဆင့်ပြောပြပါ iptables ဘာ redirect လုပ်မလဲ
ဆိုလိုသည်မှာငါဖော်ပြခဲ့သောဥပမာကို လိုက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆာဗာမှ port 110 မှတစ်ဆင့်အခြားဆာဗာသို့ပေးပို့သော traffic အားလုံးကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းချင်သည်ဆိုပါစို့ (ex: 10.10.0.2110 မှတဆင့်ထိုအသွားအလာကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ဒါကအတူတူပင်ဝန်ဆောင်မှုပါပဲ):
၁၀.၁၀.၀.၂ ဆာဗာသည် packets များသို့မဟုတ်တောင်းဆိုမှုများအားလုံးသည် client ၏ IP မှလာသည်ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ သူတို့ကတောင်းဆိုမှုများကိုရေကူးချင်ရင်ဆိုလိုသည်မှာဒုတိယဆာဗာသည်တောင်းဆိုမှုများကိုပထမဆာဗာ၏ IP နှင့်ရောက်ရှိသည်ကိုမြင်သည်။ နောက်တစ်ခုထပ်ထည့်မယ်၊ ဒုတိယစာကြောင်းကိုရေးမယ်။
ဥပမာမှာ (110) နှစ်ကြိမ်လုံးတွင်တူညီသော port ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည် traffic ကို port တစ်ခုမှအခြားတစ်ခုသို့ပြသနာမရှိဘဲ redirect နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်သည် port 80 မှ 443 ကိုအခြား server တစ်ခုသို့လမ်းကြောင်းလွှဲချင်တယ်ဆိုပါစို့။
အမည်ရ iptables၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့သိထားသောအခြား parameter များအားလုံးကိုသုံးနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သတ်မှတ်ထားသော IP တစ်ခုမှ traffic ကိုသာသာလမ်းကြောင်းပြောင်းလိုပါက၎င်းသည် -s ကိုထည့်သွင်းလိမ့်မည်။ …ဥပမာအားဖြင့် ၁၀.၁၀.၀.၅၁ မှလာသောအသွားအလာကိုသာငါပြန်ပို့လိမ့်မည်။
ဒါမှမဟုတ်ကွန်ရက်တစ်ခုလုံး (/ 24):
ငါတို့သည်လည်း -i နှင့်အတူကွန်ယက် interface ကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ် :
ငါပြောခဲ့သလိုပဲ iptables ဖြစ်တယ်၊ မင်းသိပြီးသားအရာကိုလျှောက်ထားနိုင်တယ်၊ ဒါကြောင့်ဆာဗာကသင်လုပ်ချင်တာကိုအတိအကျလုပ်နိုင်တယ်😉
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ကွန်ရက်များ / ဆာဗာများ » IP တစ်ခုနှင့် port တစ်ခုမှအခြား IP နှင့် port တစ်ခုသို့ traffic ကို redirect
port forwarding ကိုခွင့်ပြုသော firewall မှလည်းလုပ်နိုင်သည်။ (သက်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလျှောက်ထား) ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ နောက်ဆုံးမှာ Pfsense (သို့) အခြားသူများလို firewall တစ်ခုသည်နောက်ကွယ်မှ iptables ကိုသုံးပါ။
အတိအကျပြောရလျှင်၊ pfsense သည် iptables ကိုအသုံးပြုသည်မဟုတ်၊ pf၊ ၎င်းသည်အတွင်းပိုင်းသည် bsd ဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ။
၁ - ပြောင်းလဲမှုသည်အမြဲတမ်းလား။ ဆာဗာကိုပြန်ဖွင့်တဲ့အခါပျောက်သွားသလား။
၂။ ကျွန်ုပ်သည်တူညီသော subnet တွင်ဥပမာ (A, B နှင့် C) မျိုးစုံရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့် A I သည် external IP တစ်ခုသို့ traffic ကို route လုပ်ရန်နှင့် B နှင့် C မှ curls များနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းသည်အရာအားလုံးကိုအံ့သြဖွယ်ကောင်းစေသည်။ ပြproblemနာကဥပမာ A မှအလုပ်မလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့ ip နဲ့ loopback interface ကိုသုံးပြီးကြိုးစားခဲ့တယ်၊
$ iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp –dport 8080 -j DNAT – destination သို့ xxxx: 8080
$ iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i lo –dport 8080 -j DNAT – destination သို့ xxxx: 8080
$ ဆံပင်ကောက်ကောက် ip-yyyy: 8080 / hello_world
curl: (7) ၈၀၈၀ ip-yyyy port ကိုချိတ်ဆက်ရန်ချိတ်ဆက်မှုငြင်းဆန်ခဲ့သည်
$ ဆံပင်ကောက်ကောက် localhost: 8080 / hello_world
curl: (7) localhost port 8080 ကို ဆက်သွယ်၍ မရပါ။ ဆက်သွယ်မှုကိုငြင်းဆန်ခဲ့သည်
ဟုတ်တယ်၊ အပြောင်းအလဲက reboot ကျနေပြီ။ iptables-save & iptables-restore ဒါမှမဟုတ်အဲဒါမျိုးကိုရှောင်ရမယ်။
မင်းလုပ်ချင်တာကိုငါသိပ်နားမလည်ဘူး၊ ဥပမာ A ။
ကျွန်ုပ်တွင်ဆာဗာတစ်ခုရှိသည်အိုင်ပက်တစ်ခုမှ (ဆာဗာအေ's) မှသာဆက်သွယ်မှုများကိုထောက်ပံ့သည်၊ (ဖြုတ်နိုင်မှုပြforနာများအတွက်) အဖြူရောင်စာရင်းထဲသို့ IPS ထပ်မံထည့်သွင်း။ မရပါ၊ ထို့ကြောင့်ပြင်ပဆာဗာသို့အသွားအလာအားလုံးကိုဖြတ်သန်းစေလိုသည်။ ဆာဗာ (က) ကဆိုသည်။
လက်တွေ့ကျသော ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုစီအတွက်မည်သည့်အိုင်ပီကိုအသုံးပြုရမည်ကိုသတ်မှတ်သည့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ဤကိစ္စတွင်“ ပြင်ပဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုလိုသူအားလုံး၊ အိုင်ပီအေကိုသုံးရမည်” ကဲ့သို့သောအရာဖြစ်သည်။
ဤဆောင်းပါး၌ပါသောနည်းလမ်းကို သုံး၍ အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သော်လည်း၊ ဆာဗာ A သည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အိုင်ပီကို အသုံးပြု၍ ၀ န်ဆောင်မှုကိုမရရှိနိုင်သည့်ပြproblemနာသို့ရောက်သွားသည် (သို့သော်အခြားဆာဗာအားလုံး) ။
ယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့်အကောင်းဆုံးအချက်မှာမြေပုံဆွဲခြင်းကို server A's / etc / hosts file တွင်ထည့်သွင်းခြင်း၊ ပြင်ပ ip ကိုညွှန်ပြခြင်း၊
အလွန်ကောင်းမွန်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်မှာအခြား mail server ရှိရင် port 143 မှ server1 မှ server2 သို့ traffic ကို forward2 နိုင်ပြီးအီးမေးလ်များသည် serverXNUMX ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်ဆီရောက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါလော။
သီအိုရီအရဟုတ်ကဲ့၊ သေချာပါသည်၊ သင့်တွင် mail2 ကို serverXNUMX ပေါ်တွင်ကောင်းမွန်စွာတပ်ဆင်ထားရပါမည်
အလွန်ကောင်းတဲ့ဆောင်းပါး၊ ငါလုပ်နေတဲ့ပရောဂျက်တစ်ခုရှိတယ်၊ ခင်ဗျားကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးချင်တယ်၊ NAT function (စက်မှုဇုန်ခလုတ်များ) (သူတို့အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော IPTables ကိုအသုံးပြုသည်ဆိုပါစို့), ပစ္စည်းကိရိယာများကိုပြောင်းလဲခြင်းမရှိပဲ IP လိပ်စာကိုဘာသာပြန်ရန်ဥပမာရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်မှာဆာဗာရှိသည်။ ၁၀.၁၀.၂.၁ ၁၀.၁၀.၂.၁.၁.၁၀.၁.၀ ကွန်ပျူတာများနှင့် ဆက်သွယ်၍ switch မှတဆင့်လိပ်စာ 10.10.2.1 ရှိသောဆာဗာမှ ၁၀.၁၀.၂.၅ အဖြစ်အမှန်တကယ်မြင်တွေ့ရသောကွန်ပျူတာကို switch မှတစ်ဆင့်ပရိုဂရမ်ပြုသည်။ ထိုလိပ်စာရှိသောအခြားကွန်ပျူတာများမှ Ubuntu သို့မဟုတ်အခြားဖြန့်ဖြူးသောဆာဗာတစ်ခုမှငါလုပ်ချင်သည်။ iptables rules?
abraham ibarra သို့ပြန်သွားရန်
အလွန်ကောင်းသောအချက်အလက် ^ _ ^ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ငါ redirect လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေပြaနာတစ်ခုရှိသည်။ ငါရှင်းပြတယ်
Ubuntu တွင်ကွန်ရက်ကဒ် ၂ ခုပါသည့် proxy server ရှိသည်။
eth0 = 192.168.1.1 သည်ကျန်ကွန်ယက်၏ကျန်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။
eth1 = 192.168.2.2 သည် router နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတယ်။
eth0 ကိုဖြတ်သန်းရန် eth1 မှတဆင့်သွားသောအရာအားလုံးနှင့် proxy မှတဆင့် (ငါ default port သည် 3128 ဖြစ်သော Squid ကိုသုံးသည်) လိုအပ်သည်။ IPTABLES configuration ထဲတွင်သော့ကိုငါရှာမတွေ့။
သူငယ်ချင်း၊ ကျွန်ုပ်သည်အခြားဆာဗာများနှင့်အလွန်ရင်းနှီးသည်၊ ကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်အကြောင်းအရာကိုနားလည်ပြီးအလျင်အမြန်သင်ယူသည်။ ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ ဆာဗာ ၂ ခုနှင့်အတူတူပင်အင်ထရာနက်နှင့်ကျွန်ုပ်ချိတ်ဆက်ထားသော serv_2 ရှိသည်။ ဤဆာဗာများတွင်ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ပိုင်အသံပါ အောက်ပါတို့ကိုလုပ်ပါ
owncloud (ipowncloud) သို့ ip ip နေရာချသောအခါဥပမာ rangeip_1 ips အချို့ကို serv_1 သို့ညွှန်ပြသည်။ အကယ်၍ အခြား rangeip_2 ထားရှိပါက ipowncloud တူသည် serv_2 သို့ညွှန်သည်၊ ဆာဗာ ၂ ခုတည်ရှိသည်။ ကွဲပြားသောမြို့နှစ်မြို့နှင့် IP အကွာအဝေးများသည်မတူညီကြသော်လည်း၎င်းတို့အားလုံးသည်တူညီသောကွန်ယက်တွင်ရှိနေသည်၊ ပထမအပိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်၊ ဒုတိယရှင်းသည်မှာဤဆာဗာ ၂ ခုကို၎င်းတို့သည်ကြေးမုံသို့မဟုတ်အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေရန်ကျွန်ုပ်အားဤအကြံဥာဏ်ပေးရန်ညှိရန်ဖြစ်သည် သငျသညျအကြှနျုပျကိုရှင်းပြဖို့သွားလျှင်, super programmer mode ကို = မတဆင့်ချင်းမည်သို့လုပ်ဖို့ရှင်းပြပါလိမ့်မယ် = (
အန်တိုနီယို Carrizosa ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ကွန်ယက်ကိုဖွင့်ထားသည့်ကိရိယာအားလုံး၏ဆက်သွယ်ရေးကိုတာဝန်ခံပါ။ ဒီနောက်မှမီးတံတိုင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်အင်တာနက်ပိတ်ဆို့ခြင်းသည်၊ ပြန်လည်နေရာချထားခြင်းကိုကျွန်ုပ်ဖော်ပြလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ တောင်းဆိုထားသော ၀ န်ဆောင်မှုသည်အင်တာနက်မဟုတ်လျှင် firewall သို့ရောက်ရန်မလိုအပ်ပါ။
Antonio Carrizosa ကိုပြန်ပြောပါ
ဤနည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ HTTPS ကို HTTP သို့လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ပါသလား။
မင်္ဂလာပါ၊ ညနက်ပြီဆိုပါစို့၊ သို့သော်သင့်ကိုကျွန်ုပ်မေးမြန်းချင်ပါသည်၊ ကွန်ယက်တစ်ခုတည်းရှိကွန်ယက်ဆာဗာတစ်ခုနှင့်ကျွန်ုပ်ချိတ်ဆက်လိုသောအခါ client ၏ IP ကို ​​squid ကဘယ်လိုပြုပြင်မလဲ။
ကျွန်တော့်ကိုတောင်းခံခြင်းအတွက်ဆိုးဝါးစွာမဆက်ဆံပါနှင့်။ ၎င်းကို Windows တွင်ပြုလုပ်နိုင်ပါသလား။
ဒီအချက်အလက်ကကျွန်တော့်အတွက်အသုံးဝင်ပါတယ် အင်္ဂလိပ်လိုတစ်ခုခုမတွေ့တဲ့အခါငါဟာစပိန်လိုလိုအမြဲတမ်းတွေ့နေရတယ်၊ အဲ့ဒီအခါမျိုးမှာဒီ site ကိုငါလာလေ့ရှိတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
PowerShell ကို Linux တွင်ရနိုင်သည်